Ukwelashwa Surface - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Okokuqala, sidinga ukwazi ukuthi kungani umkhiqizo udinga ukwelashwa ngaphezulu, uyini umsebenzi, nokuthi uxazulula yiphi inkinga.
Okokuqala, indlela yokwelashwa ebusweni yokwakha ungqimba olungaphezulu kobuso bento engaphansi kwe-substrate ehlukile kwezakhiwo zemishini, zomzimba nezamakhemikhali ze-substrate. Inhloso yokwelashwa kwendawo ukuhlangabezana nokumelana nokugqwala komkhiqizo, ukugqoka ukumelana, umhlobiso noma ezinye izidingo ezikhethekile zokusebenza.
Amakhasimende amaningi azosibuza ukuthi kungani sidinga ukwelashwa ngaphezulu, yini umsebenzi, futhi siyini isizathu sokwengeza le nqubo?
Abasebenzi bezobuchwepheshe base-Ouzhan:Ukwelashwa ngaphezulu ukususa zonke izinhlobo zezinto zangaphandle (njengamafutha, ukugqwala, uthuli, ifilimu yakudala kapende, njll.) Enamathiselwe ebusweni bento, futhi inikeze isigaxa esihle esifanele izidingo zokugcoba ukuqinisekisa ukuthi ifilimu yokumboza inokuvikela okuhle. Ukusebenza kokugqwala, ukusebenza kokuhlobisa neminye imisebenzi ekhethekile, indawo yento kufanele yenziwe ngaphambi kokudweba. Umsebenzi owenziwe yilolu hlobo lokwelashwa ngokuhlanganyela ubizwa ngokuthi ukwelashwa kwangaphambi kokupenda (ngaphezulu) noma (ukwakheka komhlaba) ukwelashwa kwangaphambili.
Ukwelashwa kwendawo kuthuthukisa ukuqina nokulimala komkhiqizo. Ngokwesisekelo sokuqala, inyusa isikhathi sokusebenzisa futhi yonga isikhathi esiningi, izindleko nemali.
INDLELA YOKUGCINA NGOKUGCINA
Le ndlela isebenzisa ukusabela kwe-electrode ukwakha ukumboza ebusweni bento yokusebenza. Izindlela eziyinhloko yilezi:
(1) Ukuqothula amandla
Esixazululweni se-electrolyte, into yokusebenza yi-cathode. Inqubo yokwakha isembozo ebusweni besenzo samanje sangaphandle ibizwa nge-electroplating. Isendlalelo sokugoqa singaba yinsimbi, i-alloy, i-semiconductor noma iqukethe izinhlayiya ezahlukahlukene eziqinile, ezifana nokufakwa ithusi ne-nickel plating.
Esixazululweni se-electrolyte, into yokusebenza yi-anode. Inqubo yokwakha ifilimu ye-oxide ebusweni besenzo samanje sangaphandle ibizwa nge-anodization, njengokufakwa kwe-aluminium alloy.
Ukwelashwa kwe-oxidation yensimbi kungenziwa ngezindlela zamakhemikhali noma ze-electrochemical. Indlela yamakhemikhali ukufaka indawo yokusebenza kusixazululo se-oxidizing, futhi incike esenzweni samakhemikhali ukwakha ifilimu ye-oxide ebusweni bento yokusebenza, njengokuhlaza kwensimbi.
Le ndlela ayinaso isenzo samanje, futhi isebenzisa ukuhlangana kwezinto zamakhemikhali ukwakha ukumboza ebusweni bento yokusebenza. Izindlela eziyinhloko yilezi:
(1) Ukwelashwa kokuguqulwa kwamakhemikhali
Esixazululweni se-electrolyte, ubuciko bensimbi abunaso isenzo sangaphandle samanje, futhi into yamakhemikhali ekulesi sixazululo ihlangana nomsebenzi wokusebenzela ukwenza ingubo ebusweni bayo, okubizwa ngokuthi ukwelashwa kwefilimu yokuguqula amakhemikhali. Okufana nokwelashwa nge-bluing, phosphating, passivation, kanye ne-chromium of surface yensimbi.
(2) Isigaxa esingenagesi
Esixazululweni se-electrolyte, ingaphezulu le-workpiece liphathwa nge-catalytically ngaphandle komphumela wamanje wangaphandle. Esixazululweni, ngenxa yokwehliswa kwezinto zamakhemikhali, inqubo yokufaka izinto ezithile ebusweni bento yokwenza ingubo ibizwa ngokuthi ukufakwa okungafakwanga i-electroless, njenge-electroless nickel, i-Electroless plating plating, njll.
UKULUSA UKUSEBENZA KOKUSHISA
Le ndlela ukuncibilikisa noma isabalalise ngomshini okokusebenza ngaphansi kwezimo zokushisa okuphezulu ukwakha ingubo ebusweni bento yokusebenza. Izindlela eziyinhloko yilezi:
(1) Ukushisa okushisayo okushisayo
Inqubo yokufaka okokusebenza kwensimbi kuyinsimbi encibilikisiwe ukwenza ingubo ebusweni bayo ibizwa ngokuthi i-hot-dip plating, efana ne-hot-dip galvanizing ne-hot-dip aluminium.
(2) Ukufafaza okushisayo
Inqubo yokwenza i-atomizing insimbi encibilikisiwe bese iyifafaza ebusweni bento yokusebenza ukuze yenze ingubo ibizwa ngokuthi i-thermal spraying, efana ne-thermal spraying zinc ne-thermal spraying aluminium.
(3) Ukushaya okushisayo
Inqubo yokufudumeza nokucindezela ucwecwe lwensimbi ukumboza ingaphezulu lendawo yokusebenza ukuze yenze ungqimba lokumboza ibizwa ngokuthi isitampu esishisayo, njengokufaka isitampu esishisayo se-aluminium.
(4) Ukwelashwa kokushisa kwamakhemikhali
Inqubo lapho i-workpiece ihlangana khona nezinto zamakhemikhali futhi ifuthelana, futhi into ethile ingena ebusweni bento yokusebenza ezingeni lokushisa eliphezulu ibizwa ngokuthi ukwelashwa kokushisa kwamakhemikhali, njenge-nitriding ne-carburizing.
Ngokushisela, inqubo yokufaka insimbi ebekiwe ebusweni bensimbi yokusebenza yokwakha ungqimba lwe-welding ibizwa ngokuthi i-surfacing, njengokufaka insimbi ngokufaka ama-alloys amelana nokugqoka.
UKULUSA INDLELA YOKUVIKELA
Le ndlela inqubo lapho izinto ziphefumulelwa noma zenziwe nge-ionized bese zibekwa ebusweni bento yokusebenza ngaphansi komshini ophakeme wokwenza ingubo. Indlela eyinhloko.
(1) Ukuthunyelwa komhwamuko ngokomzimba (PVD)
Ngaphansi kwezimo zokushaywa umoya, inqubo yokwenza umhwamuko wensimbi ibe ama-athomu noma ama-molecule, noma ukuyifaka ion kuma-ion, ifakwe ngqo ebusweni bento yokwenza ingubo, ebizwa ngokuthi ukuthunyelwa komphunga womzimba. Ugongolo lwezinhlayiya ezifakiwe luvela ezintweni ezingezona ezamakhemikhali, njengokuhwamuka kwesigaxa somphunga, i-ion plating, njll.
(2) Ukufakwa kwe-Ion
Inqubo yokufaka ama-ion ahlukahlukene ebusweni bento yokusebenza ngaphansi kwamandla aphezulu ukushintsha indawo ibizwa ngokuthi ukufakelwa kwe-ion, okufana nomjovo we-boron.
(3) Ukufakwa Kwe-Vapor Chemical (CVD)
Ngaphansi kwengcindezi ephansi (kwesinye isikhathi ingcindezi ejwayelekile), inqubo lapho izinto ezinegesi zenza ungqimba oluqinile lokubekwa ebusweni bento yokusebenza ngenxa yokusabela kwamakhemikhali ibizwa ngokuthi ukuthunyelwa komphunga wamakhemikhali, njengokufakwa komusi we-silicon oxide ne-silicon nitride.
Ezinye izindlela zokugoqa
Ngokuyinhloko izindlela zemishini, zamakhemikhali, ezikagesi, nezomzimba. Izindlela eziyinhloko yilezi:
Indlela yokufafaza noma yokuxubha eyize inqubo yokufaka upende (owenziwe ngezinto eziphilayo noma ongaphili) ebusweni bento yokwenza ingubo, ebizwa ngomdwebo, njengokupenda, ukudweba, njll.
Inqubo yokwakha ungqimba wokumboza ebusweni bento yokusebenza ngomthelela womshini ibizwa ngokuthi ukugoqeka komthelela, okufana nomthelela we-galvanizing.
Ukwelashwa komhlaba nge-Laser
Inqubo yokukhanyisa ubuso bendawo yokusebenza nge-laser ukushintsha ukwakheka kwayo ibizwa ngokuthi ukwelashwa komhlaba nge-laser, njengokucishwa kwe-laser nokuxoshwa kwe-laser.
Ubuchwepheshe bokulungiselela ifilimu elukhuni ebusweni bento yokusebenza ngezindlela zomzimba noma zamakhemikhali bubizwa ngokuthi ubuchwepheshe befilimu obunzima kakhulu. Njengefilimu yedayimane, ifilimu ye-cubic boron nitride njalonjalo.
I-ELECTROPHORESIS NE-ELECTROSTATIC SPRAYING
Njenge-electrode, okokusebenza kufakwa kupayipi elincibilikayo elinamanzi noma elenziwe ngamanzi, futhi lenza isekethe nenye i-electrode kupende. Ngaphansi kwesenzo senkambu kagesi, isixazululo sokumboza sihlukaniswe saba ngama-resin ions akhokhisiwe, ama-cations aya e-cathode, kanti ama-anion aya e-anode. Lawa ma-resin ion akhokhisiwe, kanye nezinhlayiya ze-pigment adsedbed pigment, afakwa ku-electrophores ebusweni be-workpiece ukwakha ingubo. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-electrophoresis.
2. Ukufafaza nge-electrostatic
Ngaphansi kwesenzo senkambu kagesi yamandla kagesi e-DC, izinhlayiya zepende ezifakwe kabi ezine-atomized ziqondiswe ukundiza ku-workpiece ekhokhiswe kahle ukuthola ifilimu yopende, ebizwa ngokuthi i-static spraying.